Home Ulo oru Europe Ụmụaka Jamaal Lascelles Akụkọ Gbasara Eziokwu Ndị Na-adịghị Eke
LB na-egosi Full Story of a Football Genius onye a maara aha ya "Star Nwa". Anyị Jamaal Lascelles Ụmụaka Akụkọ na Iwepụ Biography Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site n'oge ọ bụ nwata ruo n'oge. Nyocha a na-agụnye akụkọ ndụ ya tupu ama ama, ndabere ezinụlọ, mmekọrịta mmekọrịta, na ọtụtụ ndị ọzọ OFF-Pitch facts (amaghị) banyere ya.
Ee, onye ọ bụla maara na ọ na-edekọ ihe ndekọ maka ịbụ onye a họpụtara ịbụ onye isi ọdụdụ na Premier League. Otú ọ dị, nanị ole na ole na-ewere Jamaal Lascelles 'Bio nke na-adọrọ mmasị. Ugbu a n'atụbeghị ọganihu, ka anyị malite.
Ụmụaka Jamaal Lascelles Akụkọ Gbasara Akwukwo Nsogbu -Ndụ mbido
A mụrụ Jamaal Lascelles na 11th nke November 1993 nne ya, Jill Lascelles na nna, Tim Lascelles (onye bụbu ndị England bọọlụ bọl bọl) n'asụsụ Bekee nke Derby, United Kingdom. N'okpuru ebe a bụ foto nke ndị nne na nna mara mma Jamaal Lascelles.
N'ile anya na nne na nna ya n'elu, otu ga-atụ aro na Jamaal Lascelles nwere mgbọrọgwụ afrika n'ihi na nna ya dị. Onye mmadu nke a na-ese n'okpuru ya na nwanne ya nwoke bu Rema na-etolite n'ulo obi uto nke ndi nne na nna ya huru n'anya mgbe ha na-agba agbamakwụkwọ ha mgbe umuaka abuo abuo (nke di n'okpuru).
N'adịghị ka ọtụtụ ndị na-agba ụkwụ na-etolite n'ụlọ obibi football na-ahụ n'anya, ikpe Jamaal Lascelles dị iche. Ma ya na Rema (nwanne ya nwoke) tolitere n'ụlọ ezumike basketball na-ekele nna ya, ihe akụkọ basketball nke Britain.
Ebumnuche, ikwesị ntụkwasị obi na ụgbọala abụrụla akụkụ nke ọkpụkpọ Lascelles kemgbe ọ bụ nwata. Ebe ọ bụ na Jamaal Lascelles bụ obere nwa, ọ na-achọ mgbe niile ka ọ bụrụ egwuregwu niile (bọl na basketball gụnyere).
Ụmụaka Jamaal Lascelles Akụkọ Gbasara Akwukwo Nsogbu -Ụlọ Ọrụ Na-arụ ọrụ
Mmemme nke egwuregwu Jamaal Lascelles bụ nke mbụ na-enweta bọl n'aka ya karịa ụkwụ ya. O doro anya na o tolitere n'egwuregwu bọlbụ na-agbaso nzọụkwụ nna ya. Ọ banyeghị n'egwuregwu ruo mgbe obere oge gasịrị. Dịka o kwuru n'oge gara aga;
Site mgbe m dị afọ anọ ma ọ bụ ise, papa m ga-etinye basketball n'aka m, anyị ga-aga ma lelee ya na-egwu ma na-azụ kwa ụbọchị.
Jamaal gara n'ihu ...
"Ọ ga-enweta anyị site na nursery ma wedata anyị, mụ na nwanne m nwoke ga-anọdụ ala n'ebe ahụ ma lelee ya ka ọ kpọọ. O ruru mgbe m ga-ekpebi ma achọrọ m ịkụ bọl ma ọ bụ basketball. "
N'adịghị ka ụfọdụ ndị nne na nna ga-eme, ndị mụrụ Jamaal bụ isi ihe na-akwado mkpebi ya ịkwado ịgwụrụ egwuregwu football kama ịkụ bọl. Mkpebi Jamaal na-egwu ịgba bọl bụ n'ihi n'eziokwu na basketball abụghị oke dị ka football bụ n'England. Mgbe o mechara chee echiche, nne na nna ya nyere ya nkwado dị mkpa maka otu esi aga n'ihu na ọrụ ọhụrụ ya. Ha kpọgara ya na Nottingham Forest youth usoro ebe Jamaal nwere ihe ịga nke ọma ikpe.
Ọchịchọ Jamaal Lascelles nwere mmasị na football mere ka ọ debanye aha na Nottingham Forest, bụ ndị nyere ya ohere iji gosipụta talent ya.
Ụmụaka Jamaal Lascelles Akụkọ Gbasara Akwukwo Nsogbu -Na-eto Eto
Jamaal gosipụtara nkwa mbụ mgbe ha sonyesịrị na ndị na-eto eto Nottingham Forest. Dịka nwatakiri, ọ bụghị onye nwere nkà ma ọ bụ onye kacha nwee nkà, ya mere, Lascelles aghaghị ịrụ ọrụ siri ike. Ka Jamaa na-etinye ya na NUFC nyocha;
Ụfọdụ egwuregwu, ọ bụrụ na ha na-eme nke ọma, ga-ewepụ ụkwụ ha na gas, mana maka nke ahụ, ọ bụ ihe ọzọ mere ị ga-eji na-arụ ọrụ ọbụna karị. Nke ahụ bụ naanị otú m si dị.
N'ime afọ 2011 mgbe ọ dị afọ 18, Jamaal Lascelles kwalitere na ìgwè mbụ nke Nottingham Forest. Afọ atọ mgbe ọ gbasịrị afọ mbụ, Lascelles 20 dị afọ iri abụọ gara aga iji kwado onwe ya dịka otu n'ime ndị na-eto eto kachasị mma.
Ọganihu ya gosipụtara n'oge ahụ ọ nọ na-enwe ikpe ịga nke ọma maka England. Mgbe ọ nọ n'okpuru afọ 21 maka England, Lascelles dọtara mmasị Newcastle bụ onye nwetara ya na 2014.
Na ohere ọ bụla o nwetara na Newcastle, Jamaal nyere ya aka. Ihe ngosi ya na-egosi na agha ya na agụụ ya iji nwee ihe ịga nke ọma mere mba ahụ na-anọdụ ala ma hụ ya. A rụghachiri ọrụ siri ike na 4 August 2016, ụbọchị ọ họọrọ ya Benítez ịghọ onye agha ọhụrụ Newcastle United, na-aga nke ọma Fabricio Coloccini.
Ruo oge, ikike Jamaal Lascelles nwere ike ịkwado onye a ma ama bụ nke kwesịrị ekwesị na ụzọ ọ na-esi eche nche na bọl na 6-yard. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Ụmụaka Jamaal Lascelles Akụkọ Gbasara Akwukwo Nsogbu -Ndụ mmekọrịta
N'okpuru nwoke ukwu ọ bụla, e nwere nnukwu nwanyị, ma ọ bụ ya mere okwu ahụ na-aga. N'azụ Lascelles na-aga nke ọma, e nwere nnukwu egwu dị ka onye dị na Harps Rai, nke dị n'okpuru.
Ọtụtụ ndị Fans Newcastle akọwa Jamaal Lascelles Nwanyị nwanyị, Harps Rai iji nwee ụdị yiri nke a Kim Kardashian.
Ụmụaka Jamaal Lascelles Akụkọ Gbasara Akwukwo Nsogbu -Ndụ Ezinụlọ
N'ihe gbasara agbụrụ ya, Jamaal na-enwe ọkwá dị elu na-ekele nna ya Tim, bụ onye mere ọtụtụ ego site na ọrụ ntụrụndụ ya.
Jamaal Lascelles zụlitere n'ụlọ nke ịhụnanya na nkwanye ùgwù zuru oke. Ndị nne na nna ya na-ezukọta maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 20 nke alụmdi na nwunye (-ahụ foto di na nwunye n'okpuru) egosiputa ezi ihe nye umu ha na ndi ha huru n'anya.
Ọ na-afụ ụfụ na ndị na-agba ụkwụ na-amasị Jorginho, Alexis Sanchez na Memphis Deplay agatụghị ahụ ka ndị nne na nna ha ọnụ tupu ha agafee afọ 8. Nye Lascelles, papa ya rụsiri ọrụ ike, nne m ejiriwo obi ya dum raara ya nye. Dị ka ọ dị, Jamaal nwere ezinụlọ nwere obi ụtọ dị ka a hụrụ na foto dị n'okpuru ebe a.
Ihe ịga nke ọma abụghị ihe mberede maka ezinụlọ Lascelles. Ọ bụ ịrụsi ọrụ ike, nnọgidesi ike, ịmụ ihe, ịmụ ihe, ịchụ àjà na ihe kachasị, ọnụkọ dị ka ọ dị na foto dị n'okpuru.
Banyere Lascelles 'Mum: N'ihe banyere ịbịaru nso, nne Jamaal na-ebuli aka dịka nna ya na ụmụnne ya. Ị maara? ... Nkpọkọta ekwentị mbụ a na-akpọ Jamaal mere mgbe mbụ e nyere ya aha Newcastle ka ọ bụrụ mama ya.
Lascelles kwadoro ọrụ mama ya, onye na-elele egwuregwu ya anya na nnukwu ịhụnanya nke ndị nkịta ya. Jill ozugbo zigara otu tweet nke na-aga n'ihu 1,000 retweets gosipụtara na ọ na-enye ya abụ £ 5 maka ihe mgbaru ọsọ ọ bụla ọ gbanyere azụ n'oge ọ dị afọ iri na ụma.
Ụmụnna: Rema Lascelles bụ nwanne Jamaal Lascelles. Rema, n'adịghị ka Jamaal, soro nzọụkwụ nna ya site n'ịnọgide na basketball.
Dị ka n'oge ederede, Rema na-arụ ọrụ maka Bọọlụ Nkata Ụmụaka na Hawaii Pacific University, bụ mahadum dị na Honolulu, United States. Ọ gụsịrị akwụkwọ na Derby College na Derby, England, bụ ebe ọ na-egwu basketball maka Great Britain U20s ebe o meriri EBL D1 Trophy.
Jalen Lascelles: Jalen bụ nwanne nwanne nwoke Jamac Lascelles. Ọ bụ 11 afọ n'oge ederede.
Jalen na-egwuri egwu maka ụlọ ọrụ ntorobịa Nottingham Forest. Ná mmalite, ọ họọrọ ịgbaso nzọụkwụ nwanne nwoke nwoke Jamaal dịka nrọ ya bụ iji kpọọ Newcastle United otu ụbọchị. Jalen dị mma nke ọma. A debere ya ma hụ ọrụ ụlọ.
Ụmụaka Jamaal Lascelles Akụkọ Gbasara Akwukwo Nsogbu -Na wakpo
Na 23 April 2014, aha Jamaal Lascelles bụ akụkọ niile n'ihi na ọ nọ n'etiti mkpọmkpọ ihe.
E boro Jamaal ebubo na mwakpo kpụ ọkụ n'ọnụ na mberede na Derby nightspot, Nke a mere ka e jide ya ma boro ya ebubo n'ụlọ ikpe.
A na-enye Lascelles mgbe ọ kwadoro ụgwọ ahụ. Onyeikpe Jonathan Gosling nyere Lascelles nkwado mgbe ọ gbasịrị nchọpụta CCTV. O doro anya site na CCTV na Jamaal abụghị ihe kpatara mmerụ ahụ onye ahụ gburu.
Dị ka 23rd nke February 2015, a kpochapụrụ ikpe ya. E mesịa, Lascelles kwuru na twitter;
"Mgbe e boro m ebubo na ebubo ebubo na mwakpo, enwere m ike iji obi ụtọ kwuo ugbu a ebubo ebubo niile ma kpochapụ aha m."
Ụmụaka Jamaal Lascelles Akụkọ Gbasara Akwukwo Nsogbu -Na-alụso Ọkụ ọgụ
N'October 2017, Jamaal Lascelles nwere ọgụ nkuzi na ndị otu Mohamed Diame.
Ndị ihere abụọ ahụ nwere ihere maka ihe ha mejọrọ, ha jikwa ngwa ngwa rịọ ndị ibe ibe ha, ndị na-elekọta ụlọ na ndị na-agba ha mgbaghara. Iji mezuo ha, ha gwara ha ka ha were ndị otu ndị otu na-arụ ọrụ maka nri ehihie.
Ụmụaka Jamaal Lascelles Akụkọ Gbasara Akwukwo Nsogbu -Banyere ịbụ onyeisi
A na-eme Jamaal Lascelles skipper Rafa Benitez n'ihi ikike nkà ndu ya. Nke a bụ ihe ọ ga-ekwu banyere inwe onyeisi ndị agha na n'ubu ya.
"Echere m, na-abata, M ga-ejikọta na ọnụ ụzọ, dị ka mụ na ụfọdụ ndị na-egwu egwuregwu, ihe m nwere ike ikwu na ị na-akpọ ndị na-egwu egwu na enweghị ike na ndị ọzọ, Ị MAARA ihe m chọrọ? Ịmata ndị na-egwu egwu. Echere m na m na-eme ihe dị mma, m na-echekwa ndị ọrụ ahụ na-elekwasị m anya, ụzọ m na-achọ na ebe ọ bụla. "
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ Jamaal Lascelles Ụmụaka Akụkọ na akụkọ eziokwu dị oke ọnụ. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịdị mma. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya na isiokwu a, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị !.